Ngwa email kachasị mma maka ekwentị mkpanaaka gị | Gam akporosis
Ihe ntanetị 13 kachasị mma maka ekwentị gam akporo gị
Ọtụtụ ngwa email agafewo ahịrị anyị ugbu a anyị ga-achịkọta ha na ndepụta a nke anyị ga-egosi ụfọdụ n'ime omume ọma ha, na dika enwere ndi ohuru na-abia ndi ahia email di nma.
Protonmail, dịka ọmụmaatụ, bụ otu n'ime ndị ọhụrụ ahụ ọ na-emeri obi ọtụtụ ndị ọrụ maka izo ya ezo nke email, na agbanyeghi na ọ bụ nhọrọ efu, ọ bụrụ na anyị gafere na ndenye aha ya akwụ ụgwọ, iji nwee ike iji ya na igwegharị anyị (nsụgharị desktọọpụ bụ n'efu), anyị ga-enwe ahụmịhe ka mma. Otu n'ime ihe atụ dị n'okpuru. Gaa maka ya.
5 Ozi ngwa ngwa
6 Email Samsung
7 Ọwa ozi
11 Email site Edison
Anyị anaghị emeso onye ahịa ya, ma nye onye na-enye email dị ka Gmail, Outlook ma ọ bụ Yahoo! N’aka ozo, n’agbanyeghi na anyi nwere ike iwunye ngwa gi na ekwenti anyi, anyi aghale igba oru gi site n ’idebanye akauntu ohuru ka izipu ma nata ozi-e. N'ụzọ ezi uche dị na ya, anyị ga-ekekọrịta email ọhụrụ a na ndị kọntaktị anyị. Ma mgbe ọ na-enye ohere nsụgharị desktọọpụ n'efu, ọ bụrụ na anyị chọrọ iji mkpanaka ahụ, anyị ga-agabiga site na ndebanye aha ya. Isi okwu nke ProtonMail bụ izo ya ezo email na ọ na-abịa kemfe maka ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ.
ProtonMail - ozi ezoro ezo
Outlook, dị ka Gmail, O nwere ike ijere anyị ozi dị ka onye na-eweta email yana ngwa iji ozi Gmail n'onwe ya. Eziokwu bụ na Outlook bụ ahụmahụ ngwa na nke anyị nwere ike ịnọ jụụ n'ihi ọrụ ya dị iche iche. Dịka onye na-eweta ọrụ email, ọ na-enye 15GB n'efu, adreesị aha 10 nke anyị nwere ike iji na onye ahịa ya gam akporo na desktọọpụ na mgbakwunye nke ihe ruru 25MB. A na-eji ngwa ngwa gam akporo emebere nke ọma dịka otu kachasị mma na ndepụta a nke ngwa email kacha mma.
Na Zoho Mail anyị bụ chere ihu ngwọta dị elu ma ịbụ onye na-eweta email iji dị ka ngwa anyị nwere ike iwunye na gam akporo maka ọrụ dị iche iche. Eziokwu ahụ bụ na ọ bụ adịchaghị pụtara na anyị enweghị ya n'efu, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ihe na-anaghị akụ n'akpa gị, ị ga-agafere nke na-esote. Zoho Mail nwere ọtụtụ ụdị ịkwụ ụgwọ. Na 0,90 kwa ọnwa Lite iji tinye faịlụ ruru 250MB, 5GB nke nchekwa na ngwa maka gam akporo na iOS. Mail Premium na-efu € 3,60 kwa ọnwa, mana ọ nwere 50GB nchekwa igwe ojii yana ikike itinye faịlụ ruru 1GB. N'okwu a, anyị enweghị ike ịgbakwunye akaụntụ ọzọ site n'aka onye na-eweta ọrụ ọzọ.
Ọrụ email ọzọ nke yiri Outlook na Gmail nwere ikike anyị nwere ike ịgbakwunye email anyị site na ọrụ ọzọ na ngwa gam akporo ya. Otu n'ime ndị kasị ghọtara na na site na akaụntụ efu gị na-enye anyị ohere bulite ruo 1TB nchekwa n'agbanyeghị na iji "mana", mgbasa ozi, dịka nke ọzọ nke ngwa ya dị ka Yahoo Weather, ga-anọ na ọrụ ya dị iche iche. Ọzọ nke ya kacha mma ike bụ na anyị nwere ike itinye faịlụ nke elu 2GB, ma ọ bụrụ na ị na-ejedebeghị na Gmail na nke a, ị nanị tinye gị Gmail email na Yahoo na zipu ha. Ngwa nke ezigbo imewe na nke ọzọ bụ nke a gharịrị iburu n'uche.
Ndị ọzọ onye na-akwụ ụgwọ na-ejedebe na njedebe nke ịgbakwunye akaụntụ ndị ọzọ, ma ọ na-emesi nzuzo ike. N'ime oge dị mkpa dị otú a na-etinye ihe niile ebubata na data anyị anaghị eji, Fastmail ewepụghị ịkpọsa, agaghị eji email gị zitere gị otu; Ee ee, ị nwere ike ịghọtaworị otu Gmail si zitere gị ozi ịntanetị ndị ahụ n'ụzọ dị mma ma nwekwaa ụzọ ... N'ezie, Fastmail anaghị akwụ ụgwọ na ọ bụ ọrụ adịchaghị. Nwere ike ịgafe ikpe iji nwalee ya wee kwụọ ụgwọ dịka igwe ojii nwere.
Estamos tupu nke mbụ nke ndepụta bụ n'onwe ya onye ahịa email na nke ahụ na-enyere anyị aka itinye akaụntụ niile anyị chọrọ n’aka ProtonMail, Gmail, Outlook / Hotmail, Fastmail, Yahoo na ọtụtụ ndị ọzọ; dị ka ndị ọkachamara metụtara na Bochum / ngalaba. A karịa ike free ngwa na anyị nwere na Samsung mobiles nakwa na o nwere ihe niile anyị kwesịrị iji jikwaa ozi ịntanetị nke na-eru igbe mbata ụlọ ọrụ anyị. Ee, ọ gaghị eru ogo nke ịhazi ndị ọzọ na ndepụta dịka Nine, mana ịnwere onwe ya bụ otu kachasị mma.
Anyị na-aga n'ihu na ndị ahịa mail dị ka Blue Mail, na kedu na-enye nkwado maka Gmail, Yahoo, Outlook, AOL, iCloud, Office365, ngwa Google, Hotmail na Live.com; dịka ị nwere ike iji akaụntụ azụmaahịa gbakwunye ma chịkwaa ọtụtụ akaụntụ n'otu oge na interface dị n'otu. Ọ na-enweghị ụdị nsogbu ọ bụla otú a si na igbe na ọ nwere magburu onwe usoro iheomume maka a free email ahịa. Nwere nzaghachi dị mma site na ndị ọrụ obodo ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịgafe igbe ahụ, n'etiti nke a na Samsung nwere ike ịbụ nhọrọ dị ka ndị ahịa na-ezigara ozi.
Blue Mail - Email & Kalinda
Developer: Ụlọ ọrụ Blix Inc.
Ọzọ mail ahịa na-eburu ya na-eto nke obodo nke ndị ọrụ na-eji ya kwa ụbọchị na na n'etiti ụfọdụ n'ime ya kacha mma omume bụ ya ikike nke mere na anyị nwere ike ọbụna mechie ngosi nke a ụfọdụ akaụntụ. Nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịnata ọkwa site na akaụntụ azụmahịa mana site na akaụntụ Gmail, anyị nwere ike ime ya n'ụzọ zuru oke. Ọ nwere nhọrọ nke iji akaụntụ azụmaahịa n'okpuru usoro IMAP ma ọ bụ POP3. Anyi apughikwa ileghara oru ufodu anya dika PIN nchedo; oge ịgbachi nkịtị; preview ozi na ọtụtụ ndị ọzọ.
myMail: maka Outlook na Gmail
Developer: Ụgwọ nke ụlọ ọrụ MGL MY.COM (CYPRUS) Limited
Un akwụ ụgwọ email na-akwụ ụgwọ na nke kachasị mma iji jikwaa akaụntụ ọkachamara ma ọ bụ ụlọ ọrụ; kama na desktọọpụ gburugburu ebe obibi nke PC anyị karịa na anyị mobiles, ebe ọ bụ na nke ikpeazụ anyị nwere Outlook maka gam akporo. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ anya n'etiti abụọ ngwa n'ihi na mgbagwoju anya nke mbụ, ọ bụkwa akụkụ nke na Microsoft 360 ngwọta. Anyị nwere ike ịnweta igodo dị ọnụ ala karịa site na ụlọ ahịa ụfọdụ maka azịza zuru oke maka njikwa akwụkwọ ozi ọkachamara.
Ihe ngosi 2019 - web
O sitere na iOS iji nwee ihe ịga nke ọma na gam akporo Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ azịza yiri Outlook 2019 na mkpanaka anyị na nke ahụ bụ n'efu, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe kacha mma. Ọ anyị nwere ike ịkọ nke ọma site na AI ma ọ bụ ọgụgụ isi ị ga-ejikwa igbe mbata gị. Ọ nwekwara nnukwu okike ị ga-eji ịnwale ihe niile maka ngwa na mgbe ị nwara ya, ị ga-ahapụ ndị ọzọ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-enye nkwado na akaụntụ email na-eweta email yana ndị ọkachamara nwere usoro IMAP ma ọ bụ POP3. Ngwa a bụ ihe dị egwu na ojiji nke ntinye aka dịka akaụntụ agbasoro.
Ozi Spark sitere na Readdle
Developer: Binye Inc.
Email site Edison
Otu n'ime ndị ahịa kachasị ọhụrụ anyị nwere na gam akporo ma ọ naghị enwe atụmatụ. Anyị nwere ike itinye ndị ọrụ a niile: Gmail, Yahoo Mail, AOL, Ozi, Hotmail Outlook, Exchange, IMAP, Alto, iCloud na ndị ọzọ. O nwere ụfọdụ “smarts” ọrụ dịka nsuso mbupu ma ọ bụ ọkwa ozugbo nke njem. Onye ahia email mara mma nke dị n'efu na gam akporo. Ọ bụrụ n ’ị gabiga Spark ị ga - agagharị site na Email site na Edison, ị ga - enwe ike ịtụle nke ọma.
Email- Ngwa ngwa & Ozi echekwara
Developer: Software Edison
Itoolu nwere ike kwuru n'ụzọ doro anya na n'olu dara ụda: bụ onye ahịa email kachasị akwụ ụgwọ anyị nwere na gam akporo. Ihe juputara na ya ma ya abughi ihe di ala, na nloghachi anyị ga-enwe ahụmịhe njikwa njikwa email kachasị mma na-akwado ndị niile na-enye ọrụ iji tinye akaụntụ niile anyị chọrọ. Ọ na-ejikwa nnukwu nhazi ma nwee otu ndị mmepe na-emelite ya na ọdịnaya na atụmatụ ọhụrụ. Ọ bụrụ n’ị nọ na mpaghara ọkachamara ebe ị na-ejikwa ọtụtụ ozi ịntanetị kwa ụbọchị, egbula oge inweta ya. Ọ nwere a free ikpe n'ihi na ị na akpatre ikpebi na gị zụọ.
Developer: 9 Folders, Inc.
Dị ka ụfọdụ ndị na-eji ya na-egosi, MailWise bụ ezigbo ndị ahịa maka ozi ịntanetị ọkachamara na Gmail, Outlook na akaụntụ ndị ọzọ. Karịsịa, ndị arụ ọrụ emere na ngwa ahụ nke mere na ọ naghị eji ọtụtụ ohere na nchekwa ekwentị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya tụnyere ndị ọzọ dị ka Outlook. O nwere nkwado Nkwado ma ọ bụ onye ahịa ọzọ anyị nwere n'efu na gam akporo.
Email ahịa maka Exchange +
Developer: Ozi amamihe
Ndị a ndị 13 kacha mma email ngwa ọdịnala anyị nwere ugbu a na gam akporo dị ka ndị ahịa na ndị na-enye email.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ihe ntanetị 13 kachasị mma maka ekwentị gam akporo gị